अन्तरास्ट्रिय – Karnalikhabar
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हमला गर्ने धम्की प्राप्त भएको छ । तहरीक-ए-तालिबानको इन्डिया सेलले दिल्लीमा हमला गर्ने धम्की दिएको हो । धम्की प्राप्त भएपछि दिल्लीमा सुरक्षा सतर्कता अलर्ट जारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले
रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी किभस्थित एउटा सपिङ मलमा रुसी सेनाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । विस्फोटमा केही घाइते भएका छन् । रेट्रोभाइल सपिङ मलमा रुसी सेनाले विस्फोट गराएका हुन् । विस्फोटपछि
चलचित्र ‘द कश्मिर फाइल्स’को टिमले उत्तर प्रदशेका मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेट गरेको छ । चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक विवेक रञ्जन अग्निहोत्री, अभिनेता अनुपम खेर सहित निर्माताहरु पल्लवी जोशी र अभिषेक अग्रवालले आइतबार
चीनमा १३३ यात्रु सवार बोइङको विमान दुर्घटनाग्रस्त, पहाडमा आगो देखियो
काठमाडौंं। चीनको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा बोइङको एक विमान दुर्घटनाग्रस्त बनेको छ। चीनको सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीका अनुसार सो विमानमा १३३ यात्रु सवार थिए। दुर्घटनापछि ग्वांसी क्षेत्रको पहाडमा धुँवा र आगो देखिएको छ।
काठमाडौं। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि पश्चिमी देशहरुले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । कैयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले रुसमा कारोबार बन्द गरेका छन् र कैयौं देशले रुसी विमानहरुलाई आफ्नो देशको आकाशमा प्रतिबन्ध लगाएका
जेलेन्स्कीको हुँकारले विश्वभर तरंग, तेस्रो विश्वयुद्ध तय !
काठमाडौ । युक्रेनमा रुसको आक्रमण जारी छ । यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले ठूलो दाबी गरेका छन् । जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ताका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । तर यदि वार्ता असफल
युक्रेनको मारियोपल शहर नियन्त्रण गर्न रुसी र युक्रेनी सेनाबीच भीषण संघर्ष जारी
काठमाडौं । युक्रेनको मारियोपल शहर नियन्त्रण गर्न रुसी र युक्रेनी सेनाबीच भीषण संघर्ष जारी रहेकाे छ । रुसी सेनाको घेराबन्दीमा परेको युक्रेनी शहर मारियाेपललाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले अल्टिमेटमसहित चेतावनी दिएको छ । तर
७ चैत, काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशमा रुसको आक्रमण नरोकिए तेस्रो विश्वयुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार अमेरिकी समाचार च्यानल सीएनएनसँग कुरा गर्दै जेलेन्स्कीले उक्त चेतावनी
परीक्षा गराउन कागजै किन्न नसक्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो श्रीलंका ?
कोलम्बो । कुनै समय दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र मानिएको श्रीलंका यतिबेला टाट पल्टिएको अवस्थामा छ । यहाँसम्मकी कागज र मसी आयात गर्न समेत पर्याप्त विदेशी मुद्रा संचित नहुँदा शनिबार कक्षा ९, १० र ११ को परीक्षा नै
एजेन्सी । २५ दिनदेखि जारी रुस र युक्रेनबीचको युद्ध झन् भीषण बन्दै गएको छ । रुसले युक्रेनमाथि बिना कारण गत फेबु्रअरी २४ देखि आक्रमण शुरु गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा रुस युक्रेन युद्ध खतरनाक मोडमा पुगेको छ । अहिले युक्रेनभर रुसी